नवराज सिलवालसँग दिनभर ‘पुलिस-चोर’ खेल, इतिहासमै नभएको ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो? – MySansar
नवराज सिलवालसँग दिनभर ‘पुलिस-चोर’ खेल, इतिहासमै नभएको ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो?
Posted on April 24, 2017 December 30, 2017 by Salokya
आज सोमबार हैन, नवराज बार थियो। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म नवराज सिलवाल नै नवराज सिलवाल छाएका थिए समाचारमा। दिनभर नवराज सिलवाल र प्रहरी/सरकार/अदालतबीच हामीले बच्चामा खेल्ने जस्तो ‘चोर-पुलिस’ खेल चलिरह्यो। को चोर हो र को पुलिस (साधु) चाहिँ पत्तै पाउन नसकिने। उसको कुरा सुन्यो, उही ठीक, अरुको कुरा सुन्यो अरु नै ठीक। एउटा आइजी पदका लागि इतिहासमै नभएको ड्रामा रचिँदैछ। यो ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो, निश्चित छैन। तर अति भइसक्यो अति।
सोमबार बिहानै डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको खबर आयो। प्रहरी प्रवक्ताले पक्राउ परेको हैन, बयान लिन उपस्थित गराएको भने। सिलवाल सिआइबीमा हुँदा नक्कली पाइलट र नक्कली डाक्टरहरु समातेका थिए। तर उनै सिलवाल अहिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सरकारी फाइल कीर्ते गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलमा प्रकाश अर्यालको नम्बर कपिपेस्ट गरेर कीर्ते फाइल सर्वोच्चमा बुझाएको आरोप सरकार पक्षको छ। यसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापासहितको पाँच सदस्यीय टोली बनाएको छ।
यो छानबिन टोलीले बयानका लागि नवराजलाई बोलाएको थियो। तर उनी आएका थिएनन्। त्यसपछि आज २ नम्बर गणको प्रहरी लिन गएका थिए। उनले सुरुमा जान्नँ भनेछन्। पछि वकीलसँग कुरा गर्छु भनेर शम्भु थापाकोमा गएका रहेछन्। त्यहीँबाट शम्भु थापासहित नवराजलाई हेडक्वार्टर लगिएको रहेछ। यो भयो बिहानको कुरा।
गोजीमै तयार भए जसरी उनलाई उता पक्रनु र यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्नु। अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ८ जनालाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा रिट सुनुवाई भयो। बहस भयो। साँझसम्म आदेश पनि आयो।
संसदमा विपक्षी नेता केपी ओली पड्किए। सरकारलाई ध्रुवे हात्ती भएको आरोप लगाए। उनले भने-
चितवनतिर एकताका ध्रुवे हात्तीको कुरा सुनिया थियो। ध्रुवे हात्ती जस्तै छ सरकार। बहालवाला डिआइजीलाई कानुनी परामर्श लिन गएको ठाउँमा गिरफ्तार गरियो। आरोप छैन। पक्राउ पूर्जी छैन। कसलाई रिस उठ्यो! यो कानुनी राज हुन्छ लोकतन्त्रमा कि स्वेच्छाचारी राज हुन्छ? कानुन विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले व्यक्तिका हक हनन् गर्ने, उसको सम्मान र सुरक्षामा आघात पार्ने कुरालाई के भनिन्छ लोकतन्त्रमा ?
अनि यसै ढंगले सरकार चल्ने?
मैले यो प्रसंगको कुरा गरेको हुँ। प्रसंग तर यो प्रसंगवश मात्रै हैन। म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु बहालवाला डिआइजीलाई तपाईँ बिना आरोप, बिना अपराध, बिना पूर्जी, गैरकानुनी गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणलाई के गर्नुहुन्छ होला त? वर्दीधारी डिआइजी तपाईँ गिरफ्तार हुनुहुन्छ झोँक चल्यो भने। कस्तो झोँक हो? बाँच्न पाउनु पर्‍यो नि हजुर सरकार जनताले। बाँच्न पाउनु परेन? जनताको के भएको होला हालत? कस्तो भएको होला हालत?
त्यसकारण म यस प्रकारका क्रियाकलाप तत्काल सच्याउन। यो घटना पनि तत्काल सच्याउन। यस्ता क्रियाकलाप आइन्दा नगर्न गैरकानुनी ढंगले नचल्न असंवैधानिक कानुन हातमा लिने काम सरकारलाई नगर्न सरकारलाई सुझाउन पनि चाहन्छु र सचेत पनि गराउन चाहन्छु।
सरकार भनेको लोकतन्त्रमा राणातन्त्र हैन। यो संविधान अनुसार रीति थिति विधि अनुसार चल्नुपर्छ। हामीलाई सरकार पक्षलाई जस्तो यो डिआइजी मेरो यो डिआइजी हुने उ चाहिँ हुनै नहुने भन्ने हाम्रो कुनै पनि छैन। हामी प्रशासनिक मर्यादा व्यवसायिक मर्यादा, निष्पक्षतामा विश्वास गर्छौँ र त्यसरी चल्नुपर्छ भन्छौँ। सरकारले तमाशा त देखायो देखायो आइजिपी नियुक्तिमा। सरकार आफू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फेरफार गर्छ, आरोप अन्यत्र हुन्छ। म यति साह्रो नझर्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु यति साह्रो झर्नुपर्ने केही पनि छैन। एउटा पुलिस काँधमा हालेर अर्को पुलिसलाई रोकेर अर्को पुलिसलाई छेकेर कहीँ पुगिने हैन। यो डेमोक्रेसी कहीँ पुर्याँइने कुरा हैन। यदि कसैलाई पुलिसको आइजिपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ। या अहिलेको जमाना फोर्स प्रयोग गरेर केही गर्छौँ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।
तपाईँहरु फलानो आइजिपी हुनुहुँदैन, हाम्रा लागि काम गर्दैन, फलानो आइजिपी भए काम गर्छ हाम्रा लागि भन्नुहुन्छ र त्यसरी नियुक्त गर्नुहुन्छ भने…
अनि के भन्नुहुन्छ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने अनि जेठ ३१ गते अर्को चरणको गर्ने त्यसबीचमा त्यो मतपेटिका त्यो कसले राख्छ सुरक्षा निकायले राख्छ कि सरकारको अर्को मन्त्री ज्युहरुले राख्नुहुन्छ कि कसले राख्नुहुन्छ? कसले सुरक्षा दिन्छ त्यसलाई? के पार्टी कार्यकर्ताहरु एक महिनासम्म त्यहाँ धर्ना कसेर बस्छन्? कसरी मतपेटिकाको सुरक्षा हुन्छ? कि बीचमा गन्दै अनि चुनाव गर्दै जानुहुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रकारका काम कारबाहीहरु यो अलोकतान्त्रिक विधिविपरीतका काम कारबाही नहोउन्।
जहाँ अप्ठेरो पर्‍यो त्यहीँ संशोधन गर्न सजिलो छ तपाईँहरुलाई। कानुन मान्नु नपर्ने, यो पुलिसको डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने भन्ने, अपराध देखाउनु पर्ने भन्ने कुन कानुनमा छ, यदि त्यो छ भने त्यो हटाइदिने। डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी नचाहिने भन्ने संशोधन अब ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरु। तपाईँहरुको त्यो मानसिकता देखिन्छ सरकारको।
सर्वोच्च अदालतले नवराजलाई तत्काल आजै अदालतमा उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। आदेशमा थियो-
तर ट्विस्ट के आयो भने प्रहरीले नवराजलाई अदालतमा कार्यालय समयसम्म बुझाउँदै बुझाएन। न्युरो अस्पतालमा पो लगियो भन्ने खबर पनि आयो। तर बुझ्दा प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले घरमै लगेर छाडिएको बताए।
घर पुगे होला भन्ठानेको त कहाँ हुनु। अकस्मात् फेरि अर्को समाचार आयो- नवराजलाई बी एन्ड बी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरियो। ब्लड प्रेसर बढेकोले उनलाई त्यहाँ भर्ना गरिएको बताइयो। ग्वार्कोको सो अस्पतालको क्याबिन नम्बर ३०७ मा उनी भर्ना भए। त्यहीँबाट पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए। पहिलोपोस्टसितको कुराकानीमा उनले भने – म कस्टडीमै छु र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुले मलाई सर्वोच्चमा प्रस्तुत गर्छन् होला।
के हो कीर्तेको लफडा?
यसअघि सर्वोच्च अदालतले कासमु फाइलको अङ्क गणना गर्दा हिसाब गडबड भएको भनेर इजलास अधिकृतले भनेको र त्यो भनेको सुन्ने दुई जना साक्षीको नाम जनआस्थाले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अदालतले कासमुमा नवराज एक नम्बरमा भएको र प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा भएको भनेको थियो। तर वास्तवमा प्रकाश अर्यालको नम्बर बढी भएको भन्दै अर्याललाई सरकारले आइजी बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न गएका सिलवालले आफ्नो र प्रकाश अर्यालको कासमु फाइल पनि बुझाएका थिए। त्यो र सरकारसँग भएको फाइलको हिसाब गडबड भएकोले कीर्ते गरिएको भन्ने सरकारपक्षको भनाई हो। नक्कलसमेत गर्न नपाइने आफ्नो र प्रतिस्पर्धीको कासमु नवराजले कहाँबाट पाए? अहिले उनले मिडियामा आएको रिफ्रेन्सका लागि दिएको भनेका छन्। तर मिडिया पनि फेरि सिलवाल पक्षकै समाचार लेखिरहने मिडियामा त्यो आएको थियो।
सिलवालले पेश गरेको उनको कासुम फाइलमा दुई वटा फन्ट भएको र नम्बर प्रकाश अर्यालको कासमु फाइलबाट कपिपेस्ट भएको देखिएको छ। नवराज सिलवालले पेश गरेको कासमु फाइलमा माथि एउटा युनिकोड फन्ट छ भने तल अर्को युनिकोड फन्ट छ। सिलवालको कीर्ते गरिएको कासमु फाइलमा नम्बर प्रकाश अर्यालको कासमु फाइलबाट कपिपेस्ट गरिएको देखिएको छ। तल हेर्नुस् दुवै फाइल। अर्यालको कासमु फाइलमा अङ्क लेखिएको हाते अक्षर र कीर्ते गरिएको सिलवालको कासमु फाइलको हाते अक्षर हुबहु छ।
यता लोकसेवा आयोगले पनि अदालतलाई ढाँटेको खुलासा लोकान्तरले गरिसकेको छ। लोकसेवा आयोगले एक वर्षको मात्र कासमु आफूकहाँ आएको भने पनि सबै वर्षको बुझाएको र बुझिलिनेको हस्ताक्षरसहितको भर्पाइ पनि सार्वजनिक भएको छ।
हेरौं लोकसेवाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र:
हेरौं भर्पाइको विवरण:
सर्वोच्च अदालतले वैशाख १९ गते नवराज सिलवालले हालेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दैछ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय सबैतिरबाट कासमुको असली फाइल अदालतले मगाइसकेको छ। तर त्यसअघि नै नवराजलाई हायलकायल किन पारिँदैछ, त्यो पनि अचम्मको कुरा छ। अदालतले हिसाब गडबड गरेको भन्ने कुरा एकातिर आइरहेको छ, त्यसलाई हेर्न अदालत स्वयंले असली फाइल मगाएकै छ। वैशाख १९ आउन बाँकी नै छ। किन त अहिले यो नौटंकी फेरि? कारण यो हुनसक्छ-
एक, सरकारले कासमुलाई मात्र बढुवा मूल्याङ्कनको आधार बनाएको छ। प्रहरी नियमावली अनुसार कासमुको ४० अङ्क मात्र हो। ६० को पनि हिसाब गर भन्दिन सक्छ अदालतले।
दुई, प्रकाश अर्यालको कासमुमा दुई नम्बर घट्न सक्छ। किनभने उनले कासमु साउन ७ गतेसम्म बुझाउनु पर्नेमा बुझाएका थिएनन्। नवराजको रिटमा यो कुरा पनि उठाइएको छ। हेर्नुस्-
आइजी नियुक्त गर्ने सरकारले हो। तर पनि यी सब गन्जागोलका कारण यति सजिलै र सोचे जस्तै यो नाटकको पर्दा खस्ने देखिँदैन। अझै हेर्दै जाऔँ के के हुने हो। अहिलेसम्मको ड्रामा
ड्रामा भाग ६ : वैशाख १९ गते हुने सुनुवाई
6 thoughts on “नवराज सिलवालसँग दिनभर ‘पुलिस-चोर’ खेल, इतिहासमै नभएको ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो?”
Pingback: वैशाख १९ गते प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा के निवेदन हालेछन् जुनपछि नवराज सिलवालको मुद्दाको पेशी सरेको सर्‍यै छ « Mysansar
ठूलाेबाबु पाख्रिन says:
मानिसहले जे राेप्छ त्यसैकाे कटनी पनि गर्नेछ, नवराज सिलवाललार्इ पनि त्यही भाकाे हाे ।
यो सिलवाल अलि बढी जान्ने भाको हो. मिडिया बाजी गर्न नि खप्पिस मान्छे हो . गलत काम गर्छ भने कारबाही त हुने पर्छ.
तपाईँ एक पक्षीय भएपछि अरुलाई एकपक्षीय देखिने नै भयो नि। “नवराजले गरेको किर्तेमा यस्तो छ” भनेर मैले कहाँ लेखेको छु? सिलवालको कीर्ते गरिएको कासमू फाइलको नमूना जुन हो, त्यो ठाउँठाउँमा पब्लिक भएको छ। गएर भिडाउनुस्। त्यहाँ लेखिएको जस्तो छैन भने भन्नुस्। मैले मलाई जे थाहा छ त्यही लेखेको हुँ। कसैको पक्ष लिएको हैन। मैले बोल्न मिल्छ मिल्दैन भनेर तपाईँले निर्क्यौल गर्ने हैन। तपाईँले नचाहेको कुरा मैले नबोलिदिनुपर्ने, मैले नलेखिदिनुपर्ने भन्ने हुँदैन।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा कस्तो बेला र के प्रयोजनमा हालिन्छ भनेर तपाईँले नै अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो। कसैलाई बयान लिनका लागि बोलाउँदैमा बन्दी हुन्छ? वकीलसँग बयान दिनका लागि हेडक्वार्टर गएको मान्छे बन्दी हुन्छ? प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि कति घण्टा नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? अध्ययन गर्नुस्।
These are all time wasting, misleading dramas of useless, corrupt Government, It isaclear example of where nothing functions inacredible way. Ifagovernment is run by corrupt, criminals, thugs, lazy rotten useless dirty gangs this is what we see in daily life.
Police le Kasai patrakar lai ni due kaudi ko ni gandainan akhir kin sathi harule police lai thulo parxan ma xakka pareko xu. Silwal ko adalat ma case chalirakheko xa. Gun Bahadur thapa ko Xora le haleko case tara tyo case ko wasta nagari antai kin modirakheka xan. Sathi ho baru KTM ko batoko ra fuel ko barema lekhda k hunxa hola.